ग्रह गोचर भनेको के हो र यसले हाम्रो जीवनमा कसरी प्रभाव पार्छ ?,ग्रह गोचर, गोचर फल, What isavisible planet and how does it affect our lives? | Mero Jyotish
ग्रह गोचर भनेको के हो र यसले हाम्रो जीवनमा कसरी प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ?
पूर्वीय ज्योतिष सिद्धान्त गते, बार, महिना, अयन, वर्ष, राशि, ग्रह, नक्षत्र, पञ्चांग, दशा र तिनमा आउने परिवर्तनमा आधारित छ । यसलाई सिद्धान्त, संहिता र होरा गरी तीन भागमा र अरु विभिन्न उपभागहरुमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । जसले गणित, फलित र उपचारका बारेमा विस्तृत चर्चा गर्छ ।
ती शास्त्रका अनुसार समस्त आकाशमण्डललाई ३६० डिग्रीमा बाँडिएको छ र ती ३६० डिग्रीले एक वर्षका दिनलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यो ३६० डिग्रीलाई १२ भागमा बाँडेर बाह्र वटा महिनामा वर्गीकरण गरिएको छ र हरेक महिनाको प्रतिनिधित्व मेषदेखि मीनसम्मका एकएक राशिले गर्छन् । तारामण्डलको समूहलाई नक्षत्र भनिन्छ जुन अश्विनीदेखि रेवतीसम्म २७ वटा हुन्छन् । सूर्यदेखि शनिसम्मका सातवटा बारले सातवटा ग्रहलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । बाँकी दुई ग्रह राहु र केतु छायाँ ग्रह भएकाले तिनीहरुको आफ्नो बार भने छैन ।
खगोल शास्त्रीय यथार्थमा सबै ग्रहहरुले सूर्यको परिक्रमा गर्ने भए पनि ज्योतिष शास्त्रले हामी बसेको पृथ्वीलाई स्थिर मानेर अरु ग्रहहरु आकाशमा परिक्रमा गरेको मान्दछ । यस अर्थमा सबै नौ ग्रह आफ्नो आफ्नो बाटोमा माथि भनिएको ३६० डिग्रीको वृत्तमा आफ्नो आफ्नो गतिमा सदैव भ्रमण गरिरहेका हुन्छन् । जसलाई ग्रहको गोचर भनिन्छ । खगोल शास्त्रका अनुसार त्यो ३६० डिग्री वा सबै राशिमा एक पटक भ्रमण गर्न विभिन्न ग्रहहरुलाई फरकफरक समय लाग्छ । यस्को मूख्य कारण ग्रहहरुको पृथ्वीबाट फरक दूरी र उस्को आफ्नो फरक फरक गति हो । सूर्यले करिब एक वर्षमा त्यो वृत्त भ्रमण पूरा गर्छ भने चन्द्रमाले करिब २७ दिनमा त्यो वृत्त पुरा गर्छ । मंगलले यो वृत्त एक वर्ष ६ महिनामा, बुधले लगभग १२ महिनामा, बृहस्पतिले करिब १२ वर्षमा, शुक्रले एक वर्षमा त्यो वृत्त पूरा गर्छन् । शनिलाई त्यो वृत्त पूरा गर्न तीस वर्ष लाग्छ । शनि एउटा राशिमा झन्डै लगभग साढे दुई वर्षसम्म रहन्छ । यस अर्थमा शनिलाई यो वृत्त पूरा गर्न अरु ग्रहको तुलनामा सबैभन्दा बढी समय लाग्छ । तसर्थ यसलाई ढिलो ग्रह पनि भनिन्छ ।
माथिको वृत्त पूरा गर्न लाग्ने समय हेर्दा, चन्द्रमा करिब सवा दुई दिन एउटा राशिमा बस्छ भने सूर्य, बुध र शुक्र एक एक महिना, बृहस्पति करिब एक बर्ष र मंगल करिब ४५ दिन एउटा राशिमा बस्छन् । तसर्थ ज्योतिषीरुले दैनिक र साप्ताहिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर र त्यसको प्रभावबाट, पाक्षिक, मासिक र त्रैमासिक सूर्यलगायत बुध, शुक्र र मंगलको गोचरबाट, अद्र्धवार्षिक र वार्षिक बृहस्पति र शनिको गोचरबाट निकाल्ने गर्छन् । तसर्थ ती पूर्ण र सधैं सबै विषयमा मान्य नहुन सक्छन् ।
ज्योतिर्विद्हरुले कुनै पनि मानिसको चिना टिपन बनाउने र उसका वर्तमान, भविष्य र दशाहरुका बारेमा बताउने माध्यम ऊ जन्मेको बेलामा आकाशमा ग्रह तथा नक्षत्रहरु कुन कुन अवस्थामा थिए र अहिले तिनीहरुको स्थिति के छ भन्ने हेरेर नै हो । अर्थात् एउटा निश्चित नक्षत्र र ग्रहहरुको स्थितिमा जन्मेको मान्छेको जीवनमा ग्रहहरु भ्रमण गर्दै जाँदा अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्छ ।
जब जब ग्रहहरु गोचर गर्दै एकपछि अर्को नक्षत्र र राशिमा जान्छन्, तबतब हरेक राशि र नक्षत्र भएका मानिसमा त्यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक, नकारात्मक वा सामान्य असर पर्छ । यसको मुख्य कारण सम्बद्ध ग्रहसँग सम्बन्धित महादशा, अन्तरदशा तथा सूक्ष्मदशाहरु ती राशि वा व्यक्तिलाई लाग्न जानु हो । दशा शब्दको खास अर्थ समय हो तर ज्योतिष शास्त्रको ज्ञान नभएको वा सामान्य व्यक्तिले यो शब्दलाई नकारात्मक वा अनिष्ट हुने अर्थमा मात्र बुझ्छन्, जुन गलत हो। यसरी हाम्रो जीवनमा ग्रहको गोचरले सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरु पारिरहेका हुन्छन्।